ihe omuma - GIS
Akụkọ na ihe ọhụrụ na mpaghara Geographic Information Systems
Bentley Systems mara ọkwa nnweta nke SPIDA
Nnweta nke SPIDA Software Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), ụlọ ọrụ ngwanrọ akụrụngwa akụrụngwa, taa kwupụtara nnweta nke SPIDA Software, ndị mmepe nke sọftụwia pụrụ iche maka imepụta, nyocha na njikwa nke sistemụ ịba uru. Ntọala na 2007 na Columbus, Ohio, SPIDA na-enye ngwanrọ ngwanrọ maka ịme ngosi uwe, nkwekọ ...
IMARA.EARTH mbido nke na-atụle mmetụta gburugburu ebe obibi
Maka mbipụta nke 6 nke Twingeo Magazine, anyị nwere ohere ịgba ajụjụ ọnụ Elise Van Tilborg, Co-guzobere IMARA.Earth. Mbido Dutch a n'oge na-adịbeghị anya meriri Planet Challenge na Copernicus Masters 2020 ma kpebisie ike na ụwa ga-adigide site na iji gburugburu. Okwu ha bu "Jiri anya nke uche hụ mmetụta gburugburu ebe obibi gị", ha na - eme ...
cadastre drone Geomatik GIS
Akụkọ banyere achụmnta ego. Geopois.com
Na mbipụta 6 nke Magazin Twingeo anyị mepere ngalaba a raara nye azụmaahịa, oge a ọ bụ oge Javier Gabás Jiménez, onye Geofumadas kpọtụrụla n'oge ndị ọzọ maka ọrụ na ohere enyere ndị obodo GEO. Site na nkwado na mbanye nke obodo GEO, anyị nwere ike ịhazi atụmatụ anyị nke ...
Cartografia, Akụziri CAD / GIS, Geospatial - GIS
Bhupinder Singh, onye bụbu onye njikwa ngwaahịa na Bentley Systems, sonye na ndị isi oche ndị isi nke Magnasoft
Ka ụwa na-akwadebe ịlanarị na post-COVID ụwa, Magnasoft, onye ndu na ozi gbasara ozi gbasara ọrụ na ọnụnọ na India, UK na US, na-ewetara anyị ụfọdụ akụkọ na-agba ume. O mere ka ndị isi ochichi ya na ndị isi oche ọhụụ guzobere, na-etinye Bhupinder Singh,…
Gersón Beltrán maka Twingeo 5th mbipụta
Kedu ihe onye nhazi ala na-eme? Ogologo oge anyị chọrọ ịkpọtụrụ onye na-akwado ajụjụ ọnụ a. Gersón Beltrán kwurịtara okwu na Laura García, akụkụ nke ndị otu Geofumadas na Twingeo Magazine iji nye ya echiche banyere ugbu a na ọdịnihu nke geotechnologies. Anyị na-amalite ịjụ ya ihe Geographer na-eme ma ọ bụrụ na - dị ka ọtụtụ ...
Geomoments - Uche na Ọnọdụ na otu ngwa
Gịnị bụ Geomoments? Mgbanwe ụlọ ọrụ nke anọ mejupụtara anyị na nnukwu nkà na ụzụ na njikọta nke ngwaọrụ na ihe ngwọta iji nweta ohere dị omimi na nke na-enweghị nghọta maka onye bi na ya. Anyị maara na ngwaọrụ mkpanaka niile (ekwentị, mbadamba, ma ọ bụ smartwatch) nwere ike ịchekwa ọtụtụ ozi, dịka nkọwa ụlọ akụ, ...
Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, innovations, Internet na Blogs, ọtụtụ
NSGIC na-ekwuputa ndị otu ọhụrụ
National States Geographic Information Council (NSGIC) na-ekwupụta nhọpụta nke ndị otu ọhụrụ ise na Board of Directors ya, yana ndepụta nke ndị isi na ndị otu Board maka oge 2020-2021. Frank Winters (NY) malitere dị ka onye isi oche a họpụtara ka ọ bụrụ onye isi oche nke NSGIC, na-ewepụ oche site na Karen ...
Esri banyere UN-Habitat aka na nkwekọrịta nkwekọrịta
Esri, onye ndu uwa na ọgụgụ isi ebe, kwupụtara taa na ọ bịanyela aka na nkwekọrịta nkwekọrịta (MOU) na UN-Habitat. N'okpuru nkwekọrịta ahụ, UN-Habitat ga-eji sọftụwia Esri wepụta ntọala teknụzụ na-arụ ọrụ igwe ojii iji nyere aka wulite obodo niile nwere nchekwa, nchekwa, na-adigide na gburugburu ụwa na mpaghara ...
Nna-ukwu na Geometries Iwu.
Kedu ihe ị ga-atụ anya n'aka Nna-ukwu na Geometries Legal. Kemgbe ụwa, a chọpụtala na ezigbo ala cadastre bụ ngwa kachasị dị irè maka njikwa ala, ekele maka nke a, a na-enweta ọtụtụ puku data gbasara mbara igwe na nke anụ ahụ metụtara ala. N'aka nke ọzọ, anyị ahụla na nso nso a ...
Cartografia, cadastre, Akụziri CAD / GIS, Geospatial - GIS
Bentley Systems weputara Onyinye Mgbasa Ozi Nke mbu (IPO-IPO)
Bentley Systems kwupụtara mwepụta nke onyinye ihu ọha mbụ nke 10,750,000 mbak nke klas ya na klas B. A ga-erere klas ndị a na-enye na klas B nke ndị nwe Bentley dị ugbu a. Ndị na-ere ahịa na-ere ahịa na-atụ anya ịnye ndị debanyere aha na onyinye ụbọchị 30 iji zụta ...
TwinGEO Agba nke ise - Echiche Geospatial
IHE GOSPATIAL PERSPECTIVE N'ọnwa a anyị na-ewetara Magazin Twingeo na nke ise ya, na-aga n'ihu na isiokwu bụ isi nke mbụ "The Geospatial Persention", na nke ahụ bụ na e nwere ọtụtụ akwa ịkpụ maka ọdịnihu nke teknụzụ geospatial na njikọ dị n'etiti ndị a na ndị ọzọ ụlọ ọrụ dị mkpa. Anyị na-anọgide na-ajụ ajụjụ ndị na-eduga na ...
Echiche nke Geospatial na SuperMap
Geofumadas kpọtụrụ Wang Haitao, osote onye isi nke SuperMap International, iji hụ ụzọ nyocha niile ọhụụ ọhụụ na mpaghara ala, nke SuperMap Software Co., Ltd nyere. 1. Biko gwa anyị maka njem evolushọn nke SuperMap dịka onye na-eweta ọrụ. si na China GIS onye na-enye SuperMap Software Co., Ltd. bụ onye na-eweta ọhụụ nke ...
Scotland sonyere na Nkwekọrịta Ọha na mpaghara Geospatial
Gọọmentị Scottish na Commissionlọ Ọrụ Geospatial kwetara na site na 19 May 2020 Scotland ga-abụ akụkụ nke Nkwekọrịta Ọrụ Ọha Ọha na-adịbeghị anya. Nkwekọrịta mba a ga-anọchi ugbu a nkwekọrịta nkwekọrịta nke Scotland (OSMA) na nkwekọrịta Greenspace Scotland. Ndị ọrụ gọọmentị Scottish, ...
Cartografia, Geospatial - GIS, innovations
Geopois.com - Kedu ihe ọ bụ?
Anyị na Javier Gabás Jiménez kwuru n'oge na-adịbeghị anya, Geomatics na Topography Engineer, Magister na Geodesy na Cartography - Mahadum Polytechnic nke Madrid, na otu n'ime ndị nnọchi anya Geopois.com. Anyị chọrọ iji aka anyị nweta ihe niile gbasara Geopois, nke malitere ịmara kemgbe afọ 2018. Anyị malitere site na ajụjụ dị mfe, Gini bụ Geopois.com?
cartography Geospatial Geomatik Ntanetị weebụ
Vexel eweputara UltraCam Osprey 4.1
UltraCam Osprey 4.1 Vexcel Imaging na-ekwupụta mwepụta nke ọgbọ na-esote UltraCam Osprey 4.1, nke a ukwuu vasatail nnukwu format keikuku igwefoto maka imekotaotuugbo foto photogrammetric ọkwa nadir oyiyi (PAN, RGB na NIR) na oblique oyiyi (RGB). Ntughari oge niile na egosiputa, enweghị mkpọtụ na nnọchi anya dijitalụ ziri ezi ...
foto foto sensọ ntanetị Vexcel
cadastre, Geospatial - GIS, GPS / Equipment, Engineering, innovations, ọtụtụ
EGO na Loqate gbasaa mmekorita iji nyere ndi aka n’achụmnta ego aka inweta ngwa ahia
HERE Teknụzụ, data ọnọdụ na teknụzụ teknụzụ, yana Loqate, onye nrụpụta kachasị nke nkwupụta adreesị ụwa na ngwọta geocoding, ekwupụtala mmekọrịta gbasaa iji nye ụlọ ọrụ ihe kachasị ọhụrụ na njide adreesị, nkwado na teknụzụ geocoding. Ulo oru na oru nile choro data nlebara anya ...
digitization geocoding Geomatik GIS EBE A
FES weputara India Observatory na GeoSmart India
(LR) Lieutenant General Girish Kumar, Surveyor General of India, Usha Thorat, Onye isi oche nke Board of Governors, FES na onye bụbu osote Gọvanọ nke Reserve Bank nke India, Dorine Burmanje, Onye isi oche, Global Geospatial Information Management nke United Nations (UN-GGIM) na Jagdeesh Rao, onye isi oche, FES, n'oge mwepụta nke Observatory ...
AulaGEO, ihe kachasị mma maka enyem maka ndị ọrụ injinia
AulaGEO bụ atụmatụ ọzụzụ, dabere na ụdị mmụta dị iche iche nke Geo-engineering, yana ngọngọ ụdịrị na usoro Geospatial, Engineering and Operations. Usoro nhazi sitere na "Ọkachamara Ọzụzụ", lekwasịrị anya na ikike; Ọ pụtara na ha na-elekwasị anya na omume, na-eme ihe aga-eme na ihe ndị dị mkpa, ọkacha mma naanị otu ọrụ na ...
AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, cadastre, AulaGEO, Akụziri CAD / GIS, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, Engineering, Microstation-Bentley, qgis
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 19 Next page
Dijital Twin Course: Nkà ihe omumu maka mgbanwe ohuru ohuru
Ihe ọhụụ ọ bụla nwere ndị na-eso ụzọ ya bụ ndị, mgbe etinyere ha, gbanwere ọrụ dị iche iche. PC gbanwere ụzọ anyị si anya ụgbọala ...
N'ezie - Modkpụrụ Nlereanya
Sketchup Modelling AulaGEO na-enye usoro ihe nlere nke 3D na Sketchup, ọ bụ ngwaọrụ iji chepụta ụdị ụkpụrụ ụlọ niile ...